Apple vs Samsung: Apple Oo Ku Guulaysatey Murankii Lahaanshaha Naqshadaha (patent) - Horseed Media
Apple vs Samsung: Apple Oo Ku Guulaysatey Murankii Lahaanshaha Naqshadaha (patent) August 25, 2012 Share this:FacebookTwitterGoogleMurankii ka taagnaa sharciga lahaanshaha (patent) ee u dhexeeyey labada shirkadood ee waaweyn Apple & Samsung ayaa maxkmad ku taala dalka Maraykanku go’aan ka gaartey, waxaana ay xukun ku ridey shirkadda Samsung in ay siiso shirkadd Apple lacag gaareysa 1 Bilyan oo Dollarka Maraykanka ah.
Sida maxkmadda laga soo xiganayo shirkadda Samsung waxay ku xadgudubtey oo jebishey sharciga lahaanshaha ee Apple, kadib markii ay xaddey naqshad ay iska lahayd shirkadda Apple, kuna hormarisey Telefanada xarfaanta ah ee Samsung samayso “Smartphones”, sidoo kale Samsung ayaa lagu heley in ay xadey farsamada shaashadda taabashada ku shaqeeya.
Maxkmadda ku taala dalka Maraykanka gaar ahaan gobolka Kalaforniya ayaa sidoo kale xukuntey in Samsung ay isticmaashey qaabka iyo naqshadda Teleefoonada Apple samayso.
Shirkadda Samsung ayaa dhankooda ku xirey oo dacwad ku soo oogey Apple, waxayna dalbadeen in la siiyo magdhwo gaaraya 400 oo Miylan oo Dollar, kaas oo la xiriira ku xadgudbidda Apple oo soosaarida ama alifaada Samsung.
Samsung ayaa sheegtey in Apple aysan xaq u lahayn in ay maanaboolyo ku qabsato Telefoonada geesaha ka wareegsan.
Samsung waxa ay qiratey in Apple ay soosaarto telefoono qurxoon laakiin waxay ku doodeen in aysan Apple xaq u yeelan karin ama maanaboolyo ku qabsan karin Telefoonada geesaha ka wareegsan, kaas oo Apple ku doodeyso in iyadu ay ahayd tii u horeysey ee soo saarta.
“…Kuwa ku khasaaraya xukunkaan maxkmadda waa macaamiisha, Xukunku uma muuqdo mid Apple guul ka gaartey, ee waxa uu khasaaro ku yahay waa macaamiisha dalka Maraykanka, tani waxay macaamiisha u horseedeysaa in ay ku yaraato fursadihii badnaa ee ay markii hore kala dooranayeen, fikradihii cusbaana waxay noqonayaan kuwo yaraada, halka qiimuhu kor u kacayo….” sidaas waa faallo ay Samsung ka bixisey xukunka kadib.
Shirkadda Samsung ayaa ballan qaadey in ay dacwaddan ka qaadanayso rafcaan.
Shirkadda Samsung ayaa muddooyinkii danbe la wareegtey Suuqa Telefoonada Xarfaanta ah ee ku shaqeeya taabashada, waxaana ay si weyn uga hor martey dhamaan shirkadaha tartanku ka dhexeeyo.
Shirkadda Samsung ayaa laga lee yahay dalka Koonfurta Kuuriya, halka shirkadda Apple laga lee yahay dalka Maraykanka.
Maxkmad kale oo ku taala Koonfurta Kuuriya ayaa labada shirkadoodba ganaaxdey dacwad tan la mid ah laakiin ganaaxaas waxa uu ahaa mid aad uga duwan kan Maalintii shalay, waxaana maxkmaddaasi ay ku xukuntey shirkadda Apple in ay bixiso 28 000 kun oo euro halka Samsung ay ganaaxdey lacag intaas ka yar.